दर्शक फिल्म उद्योग भन्दा परिस्कृत... :: एजेन्सी :: Setopati
दर्शक फिल्म उद्योग भन्दा परिस्कृत छन्, परिवर्तनका कारण उनै हुन् : अनुष्का
एजेन्सी मुम्बई, कात्तिक १०
एक दशकको फिल्मी करियरमा अभिनेत्री अनुष्का शर्माले पिके(२०१४), एनएच१०(२०१५), सुल्तान(२०१६) र परि(२०१८) जस्ता फिल्म गरेर आफूलाई विस्तार गरिन्। उनको पछिल्लो रिलिज 'सुई धागा-मेड इन इन्डिया'मा उनी सानो शहरमा आफ्ना पतिसँग मिलेर गार्मेन्ट उद्योग सुरूवात गर्ने महिलाको भूमिकामा आइन्। ती फिल्मले जस्तै यसपटक पनि नतिजा सुखद आयो। अनुष्काको विचारमा 'ग्ल्यामरबिहिन' भूमिका गर्दा त्यसमा ठूलो चर्चा र हल्ला गर्नुनपर्ने बुझाइ छ। हिन्दुस्तान टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले 'व्यवसायिक' र 'वर्ग लक्षित' सिनेमा भन्ने बुझाइ व्यक्तिपरक भएको बताउँदै यथार्थवादी सिनेमा किन आजको माग धारणा राखेकी छन्। सोही अन्तरवार्ताको अनुदित अंश:
किन एउटा कलाकारले ठूलो पर्दामा ग्ल्यामररहित भूमिका गर्दा ठूलो बनाइन्छ?
'सुई धागा' एकदमै व्यवसायिक फिल्म हो जोसँग ठूलो अपिल छ। तर, त्योसँगै जुन तरिकाले फिल्मको कथा भनिएको छ, देखाइएको छ, त्योचाँहि एकदमै यथार्थवादी छ। अब अचानक म र बरूण सिनेमाभन्दा बाहिरी फिल्मी दुनियाँको जस्तो त देखिन सक्दैनौ। यो आजको सिनेमाको माग हो। तपाईंले आफ्नो भूमिकाले मागेको कुरा गर्नुपर्छ।
के यथार्थवादी सिनेमाले व्यवसायिक सिनेमासरह स्थान पाउन थालेका हुन्?
कुनै पनि एजेण्डाका लागि केहि गर्नुपर्दैन्। सरसर्ती हेर्दा यो उद्योगमा जतिपनि फिल्मकर्मी र प्रतिभाहरू छन्, सबैजना रूचिकर र यथार्थवादी फिल्म गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 'लार्जर देन लाईफ' सिनेमा पनि छन् तर योसँगै यथार्थवादी सिनेमाले पनि काम गरिरहेको छ। ठूलोमात्रामा व्यापार गरेको 'दंगल' नै भनौ न। त्यो पनि यथार्थको सिमामा नै छ, त्यसमा त्यो दुनियाँको कुनै कुरालाई झुटोरूपमा त पेस गरिएको छैन।
के कलाकारहरू परिस्कृत हुँदै गएका हुन्?
दर्शक परिस्कृत भएका हुन, हाम्रो सिनेमा उद्योगभन्दा पनि बढि परिस्कृत। मैले कहिंकतै परिवर्तन गर्ने तत्वहरूले त्यसलाई अगाडी धकेलीरहेको अनुभव गर्छु, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने शक्ती उनीहरू ने हुन्।
अनि 'सुई धागा' वर्ग विशेष लक्षित सिनेमा हो भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ?
कुन वर्ग विशेष हो?, कुन व्यवसायिक हो?, कसलाई थाहा छ? यो व्यक्तिगत कुरा हो। एउटा कुरा सुन्नुस् हामी एक अर्ब ३० करोड मानिसहरू भएको देशको कुरा गर्दै छौ। यदि दुई जनाले यो वर्ग विशेष हो भने भनेर अरू सयौंलाई हामी नजरअन्दाज गर्दै ती दुईको कुरामात्र सुन्ने। तर सत्य के हो भने यी दुई जनाको सन्दर्भ पनि अन्यथा होइन, उनीहरूको कोणमा त्यो सोचाइ पनि ठीक छ।
के यी पूर्वाग्रही विचारहरू हुन्?
हेर्नुस्, 'राजी' र 'स्त्री' रिलिजपछि पनि मानिसहरुले यस्तैगरी 'वर्ग लक्षित' फिल्म हो भने। तर त्यस्ता फिल्म त त्यस्तै हुन्छन। धेरै व्यवसायिक भनिएका फिल्मले यी फिल्मले गरे जत्ति व्यापार नै गर्दैनन्।
तपाईले खानहरू तथा युवा अभिनेताहरूसँग काम गरिसक्नुभएको छ। यी दुबै खाले अभिनेताहरूबाट सधै केहि सिक्न पाउनुहुन्छ?
तपाईले मलाई सबै थाहा छ भनेर कहिल्यै सोच्न हुन्न। अरूबाट सिक्नु आफैमा राम्रो कुरा हो। सधैं खुल्ला भएर रचनात्मकरूपमा उर्जाशील र खुल्ला विचारको हुनु राम्रो हो। हाम्रा दिग्गज कलाकारहरू यस्तै हुनुहुन्छ र हामी पनि त्यस्तै हुन चाहन्छौ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १०, २०७५, ०५:१७:००
कहीँ नभएको हनुमान सप्तरीमा
डाक्टर केसीले स्थगित गरे अनसन, भने- राष्ट्रियताको बहाना गरेर राज्य कर्तव्यच्यूत नहोस्